FIHATREHANA NY CAN : Nahazo tso-drano sy fanampiana ara-bola ny Makis de Madagascar
Noraisin’ny Filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsirohotra ireo mpilalao 24 miarahalahy mandrafitra ny ekipam-pirenena eo amin’ny baolina lavalava, omaly tamin’ny 11 ora antoandro. 3 juillet 2012
Nitarika ireo delegasiona tamin’izany ny filohan’ny federasiona, Rakotomalala Marcel, niaraka tamin’ny mpanazatra sy mpanolotsaina teknika. Nandritra io fihaonana io no nanomezan’ny Filoha ny tso-drano ho an’ireto Makis ireto sy nanolorany fanampiana ara-bola mitentina 500 000 Ariary isaky ny mpilalao, mba hiatrehana ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika (Can) 2012 aty amin’ny vondrona B.
Anio no hanomboka ity fiadiana tompondakan’ny Afrika, izay hotanterahina ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Lalao manasa-dalana avy hatrany no hanombohana azy ka i Maroc no hifanandrina amintsika amin’izany raha i Senegaly sy Namibia kosa no lalao faharoa. Izay mandresy amin’ireo ekipa ireo kosa no hanao ny lalao famaranana avy hatrany amin’ny alahady 8 jolay izay, ao Mahamasina ihany.
Ny Filohan’ny tetezamita Rajoelina Andry no hiahy izany lalao goavana anisan’ny hametrahana ny tantaran’i Madagasikara eo amin’ity taranaja rugby ity, izay tena maro mpankafy tokoa raha ny eto amintsika. Tsy nijery fotsiny ireo ekipa hiaro ny voninahi-pirenena ireto anefa ny Filoha fa nitso-drano azy ireo mba tsy ho farany fa ho lohany. « Izy ireo no hiaro ny voninahi-pirenena ka rariny sy hitsiny raha toa ka tohanana amin’ny lafiny rehetra mihitsy », hoy ny filoha, Rajoelina Andry.
Araka izany dia nanolotra vola mitentina 500 000 Ariary isaky ny mpilalao (24) ny Filoha. Nahazo ny anjarany ihany koa ny Federasiona malagasy ny taranja rugby ka vola mitentina 11 tapitrisa Ariary no natolotra ny Filohan’ny Fmr, Rakotomalala Marcel. Ankoatra izay dia nahazo ny anjarany ihany koa ny mpanazatra izay nahazo 1tapitrisa Ariary avy ary 500 000 Ariary kosa no natolotry ny Filoha ny mpanolotsaina teknika.
Atao avo roa heny raha tafakatra
Ankoatra izay dia nanome toky ireto ekipam-pirenena ireto ny Filoha Rajoelina fa raha tafakatra amin’ny dingan’ny famaranana ny Makis dia mbola hahazo tambiny ihany koa ka mety ho avo roa heny amin’ny vola efa azony no homen’ny Filoha azy ireo.
Marihana fa raha azontsika ny laharana voalohany amin’ity Can 2012 ity dia afaka hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany isika eo amin’ny taranja rugby. Raha sanatria kosa ka mitana ny laharana farany dia mety hidina any amin’ny dingana ambanimbany kokoa.
Tsiahivina fa nozaraina vondrona efa tra ny aty afrika eo amin’ity lalao rugby ity. Ny ao amin’ny « vondrona A » dia ireo izay manana ahavo teknika ambonimbony kokoa. Ny vondrona B kosa no misy antsika amin’izao fotoana izao ary ny sokajy farany dia ny vondrona C1 sy C2. Samy manana ny Can avokoa ireo vondrona efatra ireo ka ny ao amin’ny vondrona B, izay misy antsika dia tanterahana ao amin’ny kianjan’i Mahamsina io.
Marihana fa efa nankatoavin’ireo teknisiana avy ao amin’ny federasiona iraisam-pirenena eo amin’ny taranja Rugby sy federasiona iraisan’ny Afrika ny kianjan’i Mahamasina ka azo handraisana lalao iraisam-pirenena. Na izany aza dia mbola misy kosa ireo pitsopitsony madinidinika izay tokony mbola hanaovana fanatsarana.
Vitaina alohan’ny faran’ny taona
Ankoatra izay dia nambaran’ny Filoha Rajoelina fa hovitaina alohan’ny faran’ity taona 2012 ity ny kianja manara-penitra izay natokana ho an’ny taranja rugby irery ihany. Ny fahatsapan’ny filoha ny fitiavan’ny Malagasy ny taranja rugby no antony hananganana sy hanamboarana io kianja manara-penitra io.
Ho hita ao anatin’io toerana io ny ivon-toerana fampiofanana, ny biraon’ny federasiona, ary efitrano fikojakojana vatana. Atolotra tanteraka ny federasiona malagasin’ny taranja rugby ity kianja manara-penitra vaovao ity aorian’ny fahavitany ka izy ireo no manara-maso sy mikarakara ary tompon’andraikitra feno amin’izany.
Amin’izao fotoana izao dia efa eo am-pandrafetana ny tetika rehetra hanamboarana ity kianja manarapenitra ity ny Fanjakana malagasy.